Myanmar Defence Weapons: အောင်ဇေယျ ဖရီးဂိတ်ပေါ်ရှိ AK-630 CIWSများ
Wai Him Soe July 3, 2012 at 2:07 AM
tak ladosh July 20, 2012 at 5:07 AM
I have read the following news from one source.
UMS Aung Zeya and other warships.
Burma's first frigate Aung Zeya has been launched ceremoniously by Vice-Senior General Maung Aye but was soon found out that its design washighly flawed and risky in high seas, prompting the regime to hastily order three frigates from China. Aung Zeya was built jointly by Burma and North Korea. North Korea has armed the frigates with its missiles, and the naval exercise was to test the efficacy of North Korean missiles and to prepare for war with Thailand. Col. Moe Aung is currently the Tactical FleetCommander of those frigates.
Could someone please let me know that the design flaw was true or false. Thanks.
Pyae Phyo February 17, 2013 at 4:39 AM
အောင်ဇေယျမှာ ဒုံးခွင်းဒုံး၊ တိုက်ချင်းပစ်ဒုံး ၊ ရေငုပ်သင်္ဘော ပစ်မလွဲဒုံး၊ လေယာဉ်မှန်သမျှ ပစ်မလွဲ အမြောက်တွေ ၊ ဘယ်ရန်သူလာလာ မိုင် ၁၀၀ လောက်က သိနိုင်တဲ့ စနစ်တွေ တပ်ဆင်ထားတယ်၊ အမေရိကန်သင်္ဘောတွေ တောင် ကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်၊ တရုတ် နဲ့ မြောက်ကိုးရီးယား က သူတို့ ကို အောင်ဇေယျ လိုမျိုး သင်္ဘော ဆောက်ပေးဖို့ စာချုပ်ပေးဖို့ အတင်းကမ်းလှမ်းနေကြတယ်၊ ရေ ချုပ် ကြီးကတော့ ရေတပ်ရဲ့ နည်းပညာတွေ မပေးနိုင်ဘူးပြောတာပဲ..
heart rebel March 27, 2013 at 12:04 PM
76mm က ဖရီးဂိတ်နဲ့သိပ်မကိုက်ဘူးဗျ။ကော်ဗက်လောက်မှာတပ်တာဘဲကောင်းတယ်။